I-Needle Roller Bearings, Izindlela Eziyinhloko - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-Needle Roller Bearings, Ukusetshenziswa Okuyinhloko
Ama-roller bearings, ngaphansi kwezimo ezivamile ukuphathwa komthamo wokukhulula usayizi wesayizi ukulinganisa usayizi ungasetshenziswa ezinhlobonhlobo zesakhiwo sokusekela. Ngaphambi kokufakwa kwesibalo, ngokuvamile uzofaka inani elifanele lamafutha. Ngakho ngaphansi kwezimo ezivamile, ngemuva kokuba ukufakwa kuqedile, abasebenzisi akudingeki ukuba bahlanganise ngokweqile amafutha okugcoba. Imikhiqizo ivalwe ivaliwe, ikwazi ukudlala indima ekugwineni, futhi ayikwazi kakhulu ukubhekana ne-axial sliding ngaphansi kwemvelo. Lo mkhiqizo, futhi unokuphila okude kakhulu, okuhlonishwa ngabasebenzisi abaningi.
Njengoba ithwala ukulinganisa okufanayo futhi ingakwazi ukubhekana nemithwalo ephezulu, ingathwala umthwalo wokushaywa kwangaphandle. Kodwa isakhiwo sinama-compact amaningi futhi ahlukene, asebenzayo futhi ukuhamba okunembile kuphakeme kakhulu, kunezihlukahlukene ezihlukahlukene emakethe, futhi kulula ukufaka. Emabhizinisini anamuhla enqubo yokukhiqiza, isetshenziselwa kakhulu ezimbonini ezihlukahlukene, njengamathuluzi emishini, i-metallurgical nezinye izimboni.